Lahatsoratra vao haingana avy ao Però · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Desambra 2018 2:02 GMT
Amin'ny teny Espaniola ny dika voalohany tamin'ity lahatsoratra ity.
Ao amin'ny bilaogy Nauta, ny lahatsoratra “Y de pronto, nos quedamos sin periodicos (Tsy manana gazety tampoka isika),” izay, manomboka ny tatitra avy amin'ny INMA: Newspaper Outlook 2006: Ny Fomba fijerim-pitantanana manolotra hevitra vitsivitsy ho antsika momba ny hoavin'ny fanontana printy. Taorian'ny lahatsoratra an-gazety, mizara ny ahiahiny momba ny hoavin'ny asa fanaovan-gazety ao amin'ny firenenay i Sandro Medina avy ao amin'ny Letra Suelta ao amin'ny lahatsoratra “Periodistas a mansalva,” mampiseho ny fahitany ny fomba fijeriny ny fananiham-bohitry ny olona izay tsy niofana manokana ho mpanao gazety eo amin'ny fanaovan-gazety. Ary hamaranana ny resaka asa fanaovan-gazety sy ny media, Fernando Lozano ao amin'ny Notas al Vuelo, amin'ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Perdimos a Expreso … Otra Vez”, mampahafantatra antsika momba ny lainga nataon'i Fujimori izay voamariky ny gazety, Expreso; lahatsoratra mahaliana izay indrisy fa tsy nisy fiantraikany mendrika azy..
Pablo Lores Kanto, bilaogera Peroviana mipetraka any Japana, manome antsika ampahany fohy amin'ny tantara foronina sarotsarotra raisina mitondra ny lohateny hoe : ¿Qué Está Haciendo Su Hija? (Inona no ataon'ny zanakao vavy?); tantara noforonina izay azo antoka fa mifototra amin'ny zava-misy. Noche Cusqueña (Alina Cuzcan) dia lahatsoratra navoaka tao amin'ny blaogy Explorando Perú an'i Rolly Valdivia izay anomezany antsika ny fahatsapany amin'ny alina ny tanàna imperialy. Ho ahy manokana, tena tiako tokoa izany satria ny alin'ny Cuzco dia toa hitako fa mahagaga ary tsy miresaka momba ny fetibe aho, fa ny maha-irery ny tanàna amin'ny ora tena lalina indrindra amin'ny alina ary koa ny lanjan'ny tantara izay ifohany rivotra.
Ao amin'ny Sin Papel, manontany i Juan Carlos Luján hoe nahoana isika no tsy liana amin'ny siansa ao Però? Taorian'ny hetsika fampianarana momba ny siansa sy ny teknolojia tsy nahasarika ny media, toe-javatra izay indrisy fa efa mahazatra. Ary, raha miresaka momba ny teknolojia, TIC para el Desarrollo (TIC -n'ny fampandrosoana) namoaka lahatsoratra fampidirana mahafinaritra mitondra lohateny hoe, “Inona no atao hoe TIC-n'ny fampandrosoana ny ambanivohitra?: Fanavazana ho an'i Maria” ahitana trangam-pampiharana TIC ao Però.
Ankilany, ny lahatsoratra , El Cholo Jacinto mitaraina momba ny kolikoly ataon'ny polisy Peroviana, navoaka tao amin'ny fanehoan-kevitry ny The Wings milaza ny fahadalana mitranga ao amin'ny firenenay raha nisy tanora maditra iray malaza niampanga ny havesatry ny fonja zakainy na dia olona mamela (hidiran'ny) “bonus” toy ny finday sy zavatra hafa, rehefa omena kolikoly mazava loatra.
Eo amin'ny sehatra politika, Sergio ao amin'ny Origami con los boletos del micro namoaka ny lahatsoratra For Followers of Fujimori (or Effects of the Syndrome of the Humiliated Wife), (Ho an'ny mpanara-dia an'i Fujimori (na ny vokatry ny soritr'aretin'ny Vady Nalàna baraka), izay mamerina lahatsoratra iray niseho tamin'ny gazety teo an-toerana. Amin'ity tranga ity, ny tena mahaliana indrindra dia ny fandresen-dahatra ao amin'ny zoro fanehoan-kevitry ny lahatsoratra. Ernesto Cardenas ao amin'ny Fisica3 milaza amintsika hoe “Tsy misy lehilahy jamba kokoa noho ny olona tsy te-hijery” ary manangona fanehoan-kevitra samihafa nalaina avy amin'ny seha-pifaneraserana izay miaro sy manome voninahitra ny filoha teo aloha Fujimori.
Miova lohahevitra isika, Luis avy ao amin'ny Autobús manana lahatsoratra antsoina hoe Dog Dance in the City (Dihin'Alika ao an-tanàna). Diego Avendaño ao amin'ny Desde la Clandestinidad milaza amintsika ny zavatra toa hitany fa Fotoana Tonga lafatra. Ary ao amin'ny Escritos de un Murcielagato dia misy tantara tena tsara: Valkiria del Nuevo Mundo.
Farany, fa tsy latsa-danja, Freddy avy ao amin'ny Nuestra Voz Siempre es Escuchada mandinika lohahevitra tena mahazatra eo amin'ny bilaogera: dokambarotra sy sivana, tonga tamin'ny fehin-kevitra fa hisy hatrany ny sivana, na voamarina na tsia, izay miteraka vokatra farany amin'ny fandaminana ny tontolontsika feno tabataba sy tsy ampy fampahalalam-baovao. Manantena izahay fa tsy hitranga izany ary midika ho mitovy amin'ny fanivanan-tena ny sivana, fifantenana ny tsara indrindra natao sy ny tsara indrindra amin'ny hafa, na faniriana fotsiny tsy hanelingelina olona hafa. Miresaka momba izany, hitsahatra tsy hanelingelina anareo aho. Farafaharatsiny, amin'ny manaraka indray.
Nadikan'i David Sasaki.